Muroexe, sumadda Isbaanishka ee ku guuleysata naqshadaheeda iyo qalabkeeda cusub | Ragga Stylish
Muroexe, sumadda Isbaanishka ee ku guuleysata naqshadaheeda iyo qalabkeeda cusub
Ragga Stylish | | Calzado
Maanta waxaan kuu keenaynaa Hombresconestilo.com nooc aad u qaas ah taasina waa mid ka mid ah kuwa aan ugu jecelnahay heerka naqshadeynta iyo ikhtiraacidda agabyada iyo qaabab ka baxsan dhaqanka. Magaciisu waa Muroexe iyo inkasta oo aad u maleyn karto aragtida koowaad, waa a Shirkadda Isbaanishka yaa awooday ikhtiraac qayb sida ma-guurto ah sida kabo. Moodooyinkeedu waxay ku saleysan yihiin naqshadaha ugu yar, qalabka hal-abuurka leh, fudeydka xad dhaafka ah si loo gaaro fikrad kabo isku dhafan oo magaalooyinka ah oo u dhexeeya kabaha iyo kabaha isboortiga iyo taabasho cad. farsamada sare taasi waxay ku jahwareereysaa dadweynaha iyadoo in ka badan 250.000 oo unug ilaa iyo hadda la iibiyay.
In kasta oo ay alaabada xidiguhu waa kabo iyo kabo isboorti, Astaantu waxay sidoo kale na siisaa alaabooyin kale sida kabo, kabo iyo qalabyada sida boorsooyinka dhabarka, boorsooyinka gacanta, ... dhammaantoodna leh qaab Muroexe ah oo la calaamadeeyay: qaababka ugu yar iyo qalabka hal-abuurka leh.
Si aan kuugu soo dhoweyno qaar ka mid ah badeecada ku qoran buug-yaraheeda, sumadda ayaa na siisay 3 nooc oo kabaha isboortiga iyo kabaha aan hoos ku arki doono.
2 Hyper Asteroid Caddaan
3 Atom Cufnaanta Metric
4 Faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay wax soo saarka
5 Sawirro kale oo ah noocyada Muroexe
El Marathon Nebula Osaka Waa mid ka mid ah moodooyinka Muroexe ee kalabar u dhexeeya kabaha iyo kabaha. Muuqaal ahaan qaabkeedu waa xarrago iyo miyir-qab, laakiin mar uun baa la dhigaa fudeydka iyo dabacsanaanta qalabka iyada oo lagu dhisay ayaa naga dhigeysa inaan dareemeyno sida inaan xirno kabo isboorti oo raaxo leh. Kabaha waxaa lagu dhisay dhar fidsan oo neefsanaya oo kuu oggolaanaya inaad xirto iyaga maalmaha ugu kulul iyada oo aan wax dhibaato ah ku qabin iyada oo ay ugu wacan tahay xumbo xusuusta ergonomic ah oo ay ku habboon tahay raadadkaaga sida galoofyada. Kaliya EVA (oo loo isticmaalo kabaha orodka ee xirfadlayaasha ah) waa xulashada ugu fiican ee lagu gaari karo badeecad aad u fudud oo leh waxqabad wanaagsan.
Waa kabo ku habboon si raaxo leh u labistaan ​​una adkaysta maalmaha shaqada ee adag laakiin haynta a muuqaal xarrago leh.
Qiimaheeda asalka ah waa € 80 laakiin hada Waxaad ku iibin kartaa iibka kaliya € 35 adigoo gujinaya halkan.
Hyper Asteroid Caddaan
Hyper Asteroid Caddaan Waa tusaale indhaha ka soo galaya, ama aad jacayl ku dhacayso ama aadan jeclayn laakiin way kugu adag tahay inaad yeelato aragti dhexdhexaad ah. Dacwadeennu waa tan koowaad, waxay noola muuqataa a moodel qurux badan oo runti dhul-gariir iyo naqshad cusub abuuray sababtoo ah minimalism ka mid ah.
Iyada oo ay adag tahay wax tolmo muuqan ah, sheyga waxaa laga sameeyaa maqaar macmal ah oo jilicsan oo maqaar ah, sida ku badan waxyaabaha Muroexe, waa mid aad u fudud. Heerka keli ah iyo kan hoose, waxay u adeegsaneysaa waxyaabo la mid ah qaabkii hore: kalidii EVA si loo bixiyo isboorti iyadoo la ilaalinayo bilicsanaanta guud ahaan iyo ergonomic insole oo laga saari karo. xumbada xusuusta.
Ahaanshaha badeecad gebi ahaanba cad, mid ka mid ah cabsidayada bilowga ah ayaa ah inay si fudud u wasakhoobi doonto oo ay adag tahay in la nadiifiyo. Xaqiiqdu waxay tahay in maqaarka synthetic uu yahay wasakh ahaan aad uga yar sidii ay u muuqan lahayd markii hore oo si fudud loogu nadiifiyo maro qoyan oo saabuun yar.
Qiimaheeda asalka ahaa wuxuu ahaa € 75 laakiin hada waxaad ku iibsan kartaa kaliya € 50 adigoo gujinaya halkan.
Atom Cufnaanta Metric
Sibabarka Atom Cufnaanta Metric Waa isbeddel Atom ah, nooca ugu guulaha badan sumadda taasna waxay ka dhigtay inay ku guuleysato suuqa dhowr sano ka hor. Waxay ka samaysan tahay maqaar dardaro oo aan biyuhu ka samaysan karin oo waa lagu heli karo 5 midab oo kala duwan dhadhan kasta. Kali waa caag, kaas oo bixiya xajin wanaagsan oo ku saabsan xaaladaha biyaha in kasta oo ay ka dhigayso culeyska mid ka sarreeya moodooyinka kale ee aan ka soo tijaabinay astaanta. Sida moodooyinka intiisa kale, waxay la imaanaysaa qalab xasaasi ah ergonomic insole oo ku habboon sida galoofka raadadkaaga.
Qaabka cusub ee Atamka Waxaad ku haysaa meesha aad ku bixinayso € 80 adoo gujinaya halkan.
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay wax soo saarka
Sida aan ku arki karno alaabooyinka aan dib u eegnay, Muroexe waa shirkad si cad ugu sharraxan naqshadeynta ugu yar iyo teknoolojiyadaha ugu dambeeya qaybta kabaha. Wax soo saarkoodu waa miyir, nadiif, ku dhowaad aan lahayn oo aad u qurux badan; waxay matalayaan barta dhexe ee udhaxeysa raaxada kabaha iyo qaabka kabaha, iyagoo maareynaya bixinta aduunka ugu fiican. Waxa ugu horreeya ee kugu dhufta waa sida iftiinka ay u yihiin, aad uga badan kabaha kale ee aad guriga ku haysato iyo sida ay ugu raaxeysanayso xumbada xasaasiga ahi insole marka ay ku habboon tahay qaabka cagahaaga oo keliya. Oo iyagu aad bay ugu raaxaystaan ​​inay xidhaan, waxaan gashaneynay maalintii oo dhan iyadoo aan cagtu haba yaraateyn.
Maaddaama ay tahay barta kaliya ee ka soo horjeedda, dharka Marathon Nebula Osaka moodelkiisu waa mid si xad dhaaf ah u jilicsan taas oo ka dhigaysa moodelku inuu si fudud cagaha wax uga beddelo oo u muuqdo mid soo jiidasho yar ka dib dhawr maalmood oo la isticmaalay.
El baakadaha waa mid kale oo ka mid ah qodobbada xoogga leh ee alaabteeda. Helitaanka iyo furitaanka qaabka Muroexe waa khibrad aad u fiican Thanks to sanduuqa taxaddar leh, tayada qalabka ku jira xariiq aad u xusuusinaya alaabooyinka Apple.
Marka laga hadlayo qiimaha, qiimaha lacagtu waa wanaagsan yahay, gaar ahaan haddii aad ka faa'iideysato dalabyada moodooyinka la dhimay.
Sawirro kale oo ah noocyada Muroexe
Hoos waxaan ku siineynaa liiska sawirrada moodooyinka Muroexe ee aan ku falanqeynay qodobkaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Calzado » Muroexe, sumadda Isbaanishka ee ku guuleysata naqshadaheeda iyo qalabkeeda cusub
Waxyaabaha saameeya caafimaadka
Garka oo gooya